Maitiro ekuita Google Chrome yako default browser pane iOS | IPhone nhau
Icho chaive chimwe chezvishamiso zve iOS 14, mukana wekusarudza inova yedu default internet browser, chimwe chinhu chiri kudiwa zvakanyanya uye icho pakupedzisira chinosvika pamidziyo yedu. iOS 14 ichiri mune beta vhezheni yakamirira nhau zuva rinotevera 15 muApple Keynote, asi kune avo vese vari kuyedza beta yazvino yeIOS 14, Google Chrome ichangobva kuvandudzwa ichitibvumidza kushandura default internet browser paIOS kuenda internet hofori browser. Mushure mekusvetuka tinokuudza maitiro ekuita Google Chrome yedu default internet browser.
Chekutanga pane zvese kukuudza kuti izvi zvinogoneka nekuda kweIOS 14 uye yazvino kuvandudzwa kweGoogle Chrome yeIOS. Kana usiri kushandisa beta yeIOS 14 uchafanirwa kumirira mamwe mazuva mashoma yeApple kusimbisa kuvhurwa kweIOS 14 uye nekudaro kukwanisa kunakidzwa nenhau dzese dzeiyi nyowani yekushandisa system. Sezvatakakuudza, ikozvino isu tinogona ikozvino kusarudza kuti ndeipi bhurawuza ndeyedu default browser pane iOS, chimwe chinhu chinobvumidza ese maoneti anowoneka muzuva redu nhasi kuvhura otomatiki neichi browser. Google Chrome ine yazvino kuvandudza yatobvumidza kumisikidzwa uku, uye iwe unogona kuiwana nekutevera aya matanho akareruka:
Dhawunirodha yazvino kuvandudzwa kweGoogle Chrome yeIOS kubva kuApp Store
Vhura iyo iOS Zvirongwa app uye peta pasi kusvikira iwe wawana Google Chrome, tinya pane aya marongero
Dzvanya pane Default browser app
Dzvanya pane Chrome
Unoona sei Ini ndasiya Safari seyangu default browser paIOS, Ndinofunga ndicho chakanakisa bhurawuza chatinogona kushandisa pane ese maMos uye Mac saka handioni kukosha kwekushandisa Chrome yechinhu ichi. Izvo zvakanaka kuve nemukana uyu, iko kuvhura kweIOS uye zvese "zvinodzorwa" kuvhura zvinogamuchirwa. Chrome ndechimwe cheanonyanya kushandiswa mabhurawuza, kana asiri iwo anonyanya kushandiswa, uye pakupedzisira zvinogara zvakanaka kuve nesarudzo yekuita yedu default browser kuti tikwanise kushandisa ese eGoogle services kubva pairi. Uye iwe, uchaita Google Chrome yako default internet browser?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekuita Google Chrome yako default browser pane iOS
Bruce Lee akadaro
Uye nekudaro, yako yese yekubhurawuza nhoroondo uye maitiro ako mukati mepeji rega rega anonyoreswa neGoogle. Panzvimbo pekuchengeta zvakavanzika zveSafari. Kwete ndatenda Chrome, asi kwete.
Safari kuongorora uye Duckduckgo.com kutsvaga.
uye chete Chrome inogona kuve default browser kana iwe unogona kusarudza chero? Ndanga ndichishandisa iCab kwemakore mazhinji uye ini handichinje iyo chero chinhu chiri pasi, asi ini ndaizochida kana chingave chiri default default
Apple inovhura iyo App Store kumitambo yekutenderera